Ndeapi ari akanakisa mamiriro edesktop e touchscreens? | Kubva kuLinux
Ndeapi ari akanakisa mamiriro edesktop e touchscreens?
Nguva zhinji, kuenzanisa kana kuongorora kwe mamiriro edesktop kubva kune mamwe maonero, senge kuti akareruka here kana kuti kwete, ndiko kuti, kana vakadya zviwanikwa zvishoma kana zvakawanda; zvakare kushandisika uye kujeka kwenzvimbo, sezvo chiri chinhu chinoongororwa nekuti zvakakosha kuti chinongedzo, chingave chakajeka kana chinyorwa-chakavakirwa, chinofanira kupa zvivakwa uye kuwedzera kugadzirwa kwevashandisi kuitira kuti vazive mushe kudyidzana naye pasina kutambisa nguva pane zvimwe zvinokanganisa; Simba renharaunda, kugona kwavo kushandurwa, ndiko kuti, kuchinjika kwavo, nezvimwewo zvakaongororwa.
Asi panguva ino, tichaenda tione mamiriro enzvimbo yakajeka kubva kune kwakasiyana maonero uye maitiro avanozvibata kana achishandiswa ine touch skrini, panzvimbo pekuti isu patinoshandisa keyboard uye mbeva kusangana navo. Ini ndinofanira kutaura kuti nharaunda yevagadziri vemapurojekiti akasiyana vakaita basa rakanaka mune vese uye vese kana vangangoita vese vanoziva maitiro ekugadzirisa zvakanaka kune aya matsva maficha, asi pane misiyano pakati pemafilosofi akasiyana ...
Zvakanaka ipapo, heino runyorwa rwe nharaunda dzakanakisa dzekubata ma skrini:
Chekutanga pane zvese, ita kuti chimwe chinhu chijeke, aya ndiwo maonero angu, pasati paine mhomho dzemashoko dzichirwisa nehurongwa hwenzvimbo nezvimwe. Mushandisi wega wega ane zvavanoda nezvaanofarira, saka pamwe zvinoita sekunge iwe kuti iro danho rakasiyana uye iwe unotonzwa sekufarira kana kunzwa wakasununguka neimwe nharaunda isiri iyo pane iyo runyorwa ... Iyo inyaya yekuravira. Mubvunzo waunofanirwa kubvunza ndewokuti: Ndeipi nharaunda yandinonyatsoziva kubata zvakanakisa kana ndeipi yandinonzwa kugadzikana nayo? Uye iyo ichave iri sarudzo yakanakira iwe ...
Isu tatoona kuti KDE Plasma inoshanda nemazvo pane chero chero nzvimbo. Iyo nharaunda inoshanda kwazvo mushe, inochinja-chinja, ine simba uye, pamusoro peizvozvo, nguva pfupi yadarika vagadziri vakaita rakakura uye rakanakisa basa kuti riite rakareruka. Isati yatadza kuremerwa, kunyangwe iine mabhenefiti, asi ikozvino inoshandisa zvishoma RAM.
Icho chinhu chakanaka chemidziyo yekrini yekubata, iyo, kunze kwematafura ane touchmonitor, anowanzove zvimwe zviwanikwa zvishoma Uye kugona kusevha zvimwe zvezviwanikwa kuti uzvishandise kufambisa izvo zvinonyanya kukosha zvinonakidza kwazvo. Nenzira, yeuka kuti kune nharembozha iwe une zvakare chirongwa Plasma Mobile.
GNOME 3 inobata-bata screencreen, pamwe nekuda kwe zviri nyore uye nekuda kwenzvimbo inogoverwa nzvimbo, nekuda kwemifananidzo yayo mikuru, nezvimwewo, uye zvimwe nekuda kwebasa rakaitwa padanho rehunyanzvi kuchinjanisa nemasaini erudzi urwu rwekubata. Asi inopesana nayo iko kushandisa kwayo zviwanikwa, izvo sezvatinoziva haisi nharaunda inopedza zvishoma.
Iri harisi dambudziko kana iwe uine laptop ine simba kana desktop PC, asi iri mune chero imwe nyaya. Asi sezvandinogara ndichitaura, sei destine zvakawandisa zviwanikwa kune chimwe chinhu kana chichigona kudzivirirwa. Kunyangwe uine zviwanikwa zvihombe, zvinogara zviri nani kuzvigovera kuzvirongwa iwe zvauri kumhanyisa kuitira zvirinani kuita mhedzisiro.
Nzvimbo Cinnamon inopa yakapusa, inoshandiswa uye neWindows-senge interface. Ndokusaka inogona kuve yakanaka sarudzo kune vashandisi vanobva kunzvimbo dzeMicrosoft. Kana zviri zvekubata masikirini, ivo vanozivawo maitiro ekuenderana navo, kushandisa kugona kuona matinji uye mabhatani ekuburitsa kwazvino. Ivo vachiri kufanira kugadzirisa, nekuti hapana chakakwana, asi chinoshanda nemazvo zvakawandisa. Zvichida imwe tsananguro yakaipa ndeyekuti kana iwe uine skrini diki, zvimwe zvinhu zviri padhuze nepadhuze uye zvinogona kutungamira mukukanganisa kana uchimanikidza nekudzvanya pane chinhu chawanga usingade ...
Kana iwe uchinetseka nezve yakanakisa distros yekubata skriniKutaura kuti Ubuntu, Fedora, Debian, openSUSE, uye Linux Deepin inogona kunge iri sarudzo dzakanaka dzekushandisa pasina matambudziko neyako inoshanduka laptop, 2-in-1, piritsi kana desktop ine inobata skrini.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Chigadzirwa » Ndeapi ari akanakisa mamiriro edesktop e touchscreens?
Adrian denk akadaro
Damn! Ini ndakaisa XFCE kuti ikurumidze!
Inonakidza kwazvo ichi chinyorwa. Ini ndichangobva kutenga Wacom Mobilestudio pro 16 ine Windows 10 uye ndinoda kuziva kana zviri nyore kuisa gnu / linux mairi. Ndiri kunyatsoda kuziva.
Mhoroi munhu wese, kde plasma inozvibata sei nekuchinja kwemaonerwo, dhizaini yetablet, pamasikirini ane oscilloscope.
Chinja Raspberry yako Pi kuita gore rako neakoCloud
ExTiX 19.4 inosvika neDepin 15.9.3 uye Linux 5.0